Monologue - iyindlela ethi imicabango yakhe
Monologue - isitatimende oyedwa okufakiwe ngomlomo noma ngokubhala. Ngesikhathi esifanayo uklanyelwe ukwamukelwa asebenzayo lesilinganiselwa kumuntu kuhloswe. Umamukeli ungathola kangcono okushiwo a Monologue ekuxhumaneni ngokuqondile noma ngokungaqondile. Lapho contact imisiwe phakathi ekhelini kanye nombhali mlayezo ukuba umlamuleli, endimeni yakhe ngokuvamile enze amadivayisi lobuchwepheshe, i-imeyili, ukuphrinta.
Ukuqhathanisa Monologue kanye nokuxoxisana
Uma inkhulumomphendvulwano exchange kwamazwi phakathi interlocutors ezimbili noma ngaphezulu, ama-Monologue - itshalwa futhi inkulumo okunenjongo, okuyinto umlobi kumelwe banakekele nokuqukethwe kwalo ulwazi. Lapho izinhlangothi njalo siguqula izindima inkhulumomphendvulwano kanye ukulalela isikhulumi, isitatimende ngasinye kuyindlela yemvelo yokusabela lapho. Siza ukugcina ekuthinteni ingxoxo, buviyoviyo, isimo sobuso. Kukho konke lokhu kukhona Monologue, umamukeli ayikwazi ubuze ngento okuvela kumbhali noma ucacise imininingwane.
Isitatimende enemininingwane ngokuvamile okunqala umbhalo. It is ihlelwe letihlelekile naletingakahleleki wokufihla, futhi linye. Ukuze zonke obusebenzayo inkulumo izitayela kuyinto Monologue eyamukelekayo, kodwa ngamunye wabo lapho ebonakala njengoba Monologue izinhlobo ezihlukahlukene zomculo. I isitayela yesayensi kungaba ukubuyekeza, indatshana noma wokulandisa. Ngo eyayivame incwadi ezivamile futhi indaba lesibonwa - indzaba, sihloko, ukubuyekeza, ukuxhumana. Isikhulu isitayela Monologue - isitifiketi, umthetho, isimemezelo noma umbiko.
Umbhali Inkulumo enwetshiwe kufanele njalo kube umuntu engathi isigijimi sakhe, akakwazi ukukhuluma yedwa. Indima esasizibekele yona ingase ibe siqu noma okusindayo, incike ukwakhiwa kombhalo, okuqukethwe kanye netimphawu okuqonda. Monologue njalo kuqhathaniswa ingxoxo yayo yonke ibhayisikobho inhlanganisela ngokuvamile eyakhelwe kwezobuciko temibhalo yephrozi netindzaba izinhlobo. Nakuba efakwe lisho ukuxhumana yokwenziwa, ke unawo yimvelo yekuchumana. Ngamunye dialogical Monologue, nje izici ezincane engavamile inkhulumomphendvulwano ayiziswana futhi.
Zonke monologues zihlukaniswe izinhlobo eziningana kuye ithegi obusebenzayo-semantic ukuthi linamathele umbhalo isizinda. Okuvame kakhulu kucatshangwa ukuthi incazelo lelandzisako nokucabangisisa. Itheksthi lelandzisako basonta uhlobo indaba futhi ngesisekelo netindzaba. Kuyinto esivela Dynamics izenzakalo. Monologue Isici kulokhu kuhlanganisa ukuchayeka zamehlo, ukuthuthukiswa, umvuthwandaba atihambi todvwa.
Incazelo kuyinto uhlobo inkulumo, ehlanganisa izakhi ukudluliswa kanye bento, izenzakalo zawo zangaphandle izici static izici yangaphakathi. Lolu hlobo iyafana indaba, kodwa tento asetshenziswa lapha sokuthuthukiswa isenzo, futhi izici into. Ukubonisana kuyinto uhlobo engqondo umsebenzi, ibhekwa njengomlando wesonto izincazelo ezivamile futhi syllogisms.
Monologue - isitatimende afanele imicabango kokwakhe, okubonwayo, iziphetho. Kudinga ethile yombhali izwi ukulungela, uhlele bese injongo.
Iyiphi indlela kwekusebentisa sesenzo? Tento sanyalo ngesiRashiya
Indlela - "Lewis" noma "Levays"? KaLevi - Transcription
Timphawu tesakhiwo ngolimi Russian. yegama
Inhlonipho - Iyini?
Bellissimo - yini ukuthi izwi?
UVladimir, oNgcwele Rosary womlando wesonto, incazelo
Ngubani Norfolk Terrier?
Kwesosha - ubani lo? Ngubani kwesosha futhi siyini isimo salo international?
Yiziphi salungiselela ncwadi kuyiphupho nje? Bird - nakanjani ziwuphawu oluhle.
Cotoneaster brilliant - i material esihle kakhulu sobuciko
I ovulekile ukunwetshwa .sig? incazelo Ifomethi yefayela nezinhlelo ezihambisana
Uwoyela Izinwele Moroccanoil. Izibuyekezo
Isifundazwe naseVolyn: umlando, amaqiniso